Artec : « Miasa amin’ny fomba tsy ara-dalàna ny Orange… » | NewsMada
« Efa nanefa ny vola rehetra tokony haloany amin’ny fanavaozany ny fahazoan-dalana hitrandraka amin’ny maha orinasan-tserasera azy ny Orange, mifanaraka amin’ny lalàna vaovao izao mihatra… », hoy ny ampahany tamin’ny fanambarana nataon’ny orinasa Orange Madagascar, ny 27 avrily lasa teo. Tsy niandry ela fa avy dia namaly izany tamin’ny alalan’ny fanambarana ihany koa ny Artec, na ny sampandraharaha misahana ny fandrindrana ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara.
« Tsy mbola nanefa ny haba sy izay rehetra tokony haloany tamin’ny taona 2015 taty amin’ny Artec izany ny Orange Madagascar. Tsy mbola nanao sonia ny bokin’andraikitra nalefan’ny sampandraharaha misahana ny fandrindrana ihany koa izy, tsy toa ireo mpandraharaha roa hafa… », hoy ny fanombohan’ilay fanambarana.
Tsy vitan’izay fa miasa amin’ny fomba tsy ara-dalàna ny Orange Madagascar, raha ampitahaina amin’ireo orinasa roa hafa. Na dia tsy nisy neken’ny Fitsarana aza mantsy ireo fangatahana fanafoanana rehetra nataon’ny Orange Madagascar, bokin’andraikitra izay « novainy » ihany no arahiny amin’izao fotoana izao.
Nanamarika hatrany ny Artec fa tsy mbola nohajain’ny Orange Madagascar ihany koa hatramin’izao ny tokony hanomezany alalana ny hafa amin’ny fampiasana ny toerana hahatongavan’ny « câble » iraisam-pirenena, araka ny lalàna manan-kery sy fanao maneran-tany.